एक पाइने व्यापार कसरी खोल्न। व्यापार, वेंडिंग लागि आवश्यक उपकरण
व्यापार, व्यापार अवसर
वेंडिंग - को अंग्रेजी देखि। जसको अर्थ «पाइने» "वेंडिंग मिसिन मार्फत विभिन्न उत्पादन र सेवा को खुद्रा बिक्री।" आर्थिक शब्दकोश मा यस्तो मूल्य परिणाम।
बिक्री, प्रयोग, वेंडिंग व्यापार उपकरण सबै लगभग सक्छन्। जापान, त्यसैले पनि प्रत्यक्ष beetles, स्थानीय दन्त्यकथा अनुसार, mascots प्रतिनिधित्व जो प्राप्त। सबैभन्दा साधारण अन्डा - चीन मा। रूस मा, उदाहरणका लागि, यो सम्भव मोटर वाहन गाडीको अगाडीको शिशा तरल पदार्थ को बिक्री को लागि एक विशेष एकाइ स्थापना गर्न छ। यसरी, यो जूता को एक किसिम वा अखबार वा पुस्तकको प्रविधी बेच्न सम्भव छ। यस्तो उपकरण रूस मा छ।
तथापि, टाढा व्यापार वेंडिंग लोकप्रिय विचार गरेर - यो स्वचालित छ, भेटी सबैलाई कफी र अन्य तातो र चिसो पेय, चिप्स, पटाखे, चकलेट बारहरू, स्यान्डविच को एक किसिम संग उपचार गर्न।
भुक्तानी टर्मिनल, साथै, क्यामेरा - वेंडिंग मिसिन पनि सेवाहरूको बिक्री संग मानिन्छ।
व्यापार, वेंडिंग निर्देशन
तसर्थ, पाइने व्यापार आज तीन प्रमुख क्षेत्रहरु छ:
- बिक्री खाद्य उत्पादनहरु को;
- बिक्री उपभोक्ता सामान को एक किसिम को;
- सेवाहरूको प्रावधान।
आज व्यापार वेंडिंग उद्यमीहरू लागि विशेष गरी साँचो हुनेछ कि केही क्षेत्रको छ। प्लस उहाँले केहि। पहिले, यो एउटा सानो मूल मूल्य छ, र दोश्रो कुरा, लगानी मा तेस्रो, छिटो बदलामा व्यापार गरिरहेको को सापेक्षिक सजिलो।
वेंडिंग व्यापार: सुरु बिन्दु
सबै को पहिलो यो क्षेत्र र व्यापार ठाउँमा निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। कि पछि, यो यो पाइने व्यवसायको लागि आवश्यक छ कि स्पष्ट हुन्छ।
तपाईं आफ्नो कफी मिसिन व्यापार को लागि चयन भने, यसको स्थापना कार्यालय, एक ठूलो पुस्तकालय, विद्यालय, सपिङ्ग सेन्टर, रेल स्टेशनमा धेरै सान्दर्भिक छ। एक कप कफी आफैलाई व्यवहार कसरि कर्मचारीहरु सहमत हुनेछन् आफूलाई, र यी संस्थाहरू आगन्तुकहरूलाई सक्षम गर्नुहोस्।
प्रतिलिपि मिसिन स्थापना पुस्तकालय वा शैक्षिक संस्था लागि सान्दर्भिक हुनेछ; विभिन्न मिडिया को बिक्री को लागि उपकरण - रेलवे स्टेशन अस्पताल, को लागि; प्याक जुत्ता को बिक्री को लागि कवर - .. को अस्पताल र संग्रहालय, आदि को लागि उपकरण स्थापना साइट चयन गरेपछि, तपाईँले एक विस्तृत व्यापार योजना वेंडिंग व्यापार विकास गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
पनि ध्यान यसको स्थापना संकेत गर्न उत्पादनहरु ध्यान आकर्षित गर्न संभावित खरीदारों गर्न, प्रतिस्पर्धा मिसिन को अस्तित्व तिर्नुपर्छ।
व्यापार, वेंडिंग रूपमा यस्तो निर्देशन मा आफ्नो व्यापार सुरु गर्न, यो केवल एक मिसिन छ। तर, धेरै उत्पादकहरु र उद्यमीहरू को अवस्थित अनुभव अनुसार, एकाइहरूको न्यूनतम, साथै लागत-प्रभावकारी नम्बर तीन कम छ। यस मामला मा, परिवहन लागत एकदम इष्टतम हुनेछ। र सम्बन्धित लागत समयमा उपभोग्य सन्दर्भमा थोक छूट को प्रावधान भर गर्न सम्भव हुनेछ।
उपकरण आवश्यक कागजात
व्यापार, वेंडिंग खोल्दै खरिद सबै उपकरण लागि आवश्यक कागजात को एक उपयुक्त सेट आवश्यक:
• पहिले, यो उत्पादन पासपोर्ट, जो, बारी मा, मेशिन द्वारा प्रदान कुञ्जी जानकारी समावेश गर्नुपर्छ छ;
• दोश्रो, यो विनिर्देशों प्राप्त प्रविधि, साथै यसको सुविधाहरू विवरण;
• तेस्रो, पूर्ण प्याकेज;
• चौथो, निर्माता उपकरण लागि प्रदान गर्दछ कि ग्यारेन्टी विवरण;
• पाँचौं, सञ्चालन अवस्थाको विवरण, समय अधिकतम रकम उपकरण को जसको तहत यस प्रकार र यसको अगाडी पछिल्लो गर्न सक्नुहुन्छ।
अवश्य पनि रूसी संघ को राज्य मानक को प्रमाणीकरण को सामान्य प्रणाली को एक अधिकृत शरीर द्वारा जारी हुनुपर्छ जो एकरूप को प्रमाणपत्र, को हातमा उपस्थिति छ।
मिसिन को अपरेटर यसका महत्त्वपूर्ण निर्देशन। यो मिसिन को सफल कार्यका लागि आवश्यक केही व्यक्तिगत घटक को र उपयुक्त परिचालन निर्देश, साथै कार्यक्रम र ड्राइभर को एक किसिम प्रस्तुत गर्न उचित छ।
रूस मा मिसिन को मिलाइएको
रूस मा आयात वाहन को कुनै पनि मिलाइएको (प्रदान गर्न र उपचार, समर्थन केन्द्र जारी, या त विक्रेता वा प्राविधिक कर्मचारी) आफ्नो संरचना बिक्री मा संलग्न छन्। वेंडिंग मिसिन स्थापना, अधिक लोकप्रिय छ जो एक व्यापार, तिनीहरूले सबै प्राविधिक र सेवा दस्तावेज संग खरीदार प्रदान गर्नुपर्छ र साथै, प्रमाणपत्र जारी गर्न। कागजात कुनै पनि निर्माता भाषा बाट अनुवाद मा मा रूसी हुनुपर्छ। निस्सन्देह, सबै यो अन्तिम जसद्वारा को पाइने व्यापार, समीक्षा जो अब कहीं सुने गर्न सकिन्छ को मालिक, लाभदायक हुनेछ, खरिद उपकरण को लागत प्रतिबिम्बित हुनेछ।
यस्तो मिसिन को दिनचर्या मर्मतका (संग्रह, विभिन्न उपभोग्य लोड र यति मा। डी) यो सामना गर्न सक्षम छ र कला को मालिक, तर सामान्यतया पहिले नै सेवा विक्रेता सेवा गर्न आमन्त्रित समस्याको समाधान गर्न विफलता को मामला मा।
तर, यो कसरी सबै आवश्यक निर्माण गर्न अग्रिम सोच्न महत्त्वपूर्ण छ , मर्मतसम्भार अचानक एउटा असफल मिसिन सबै जाँच थियो र सकेसम्म मरम्मत, र किनभने स्थिर निष्क्रिय उपकरण को व्यापार वेंडिंग को बिक्री आवश्यक थिएन। सकारात्मक nuance तथ्यलाई मा निहित भन्ने आधुनिक मिसिन आफ्नै क्षति रिपोर्ट हुनेछ कि एक कार्यक्रम, अर्थात्। ई एसएमएस-सन्देश मार्फत दावी मोबाइल फोन नम्बर दिनेछु "दुःखको।" मा
एक भाँचिएको मिसिन सकारात्मक भावना वा (बस सेवा प्रयोग वा सामान किन्न जाँदै छन् जो) संभावित खरीदारों कारण छैन भनेर भूल छैन, न त प्राप्त सेवा अघि भुक्तानी गर्ने गरे वा आंशिक वा पूर्ण आपत्ति ती पनि। तपाईं आफ्नो तिर्खा, चम्किरहेको पानी को एक बोतल लागि भुक्तानी निभाउन गर्न चाहनुहुन्छ जब बस, आफ्नो भावना कल्पना, र यो गर्न मिसिन टूटने भङ्ग कारण छ! या तपाईं एक आवश्यक कागजात र यो क्रम को बीचमा जाम थियो मिसिन द्वारा जारी कागज छाप्न हतारमा छन्! एकै समयमा पनि आज बन्द एक दिन रूपमा प्राविधिक सहयोग सम्पर्क गर्न संभावना छ ...
तर, यो अवस्थामा सिकार पनि एक उद्यमी, मेशिन मालिक छ। दैनिक राजस्व को भाग क्षण मा मिसिन उत्पादन पूर्ण थियो र सेवा को समय दिन सकेन र थप राजस्व "प्राप्त" गर्न कारण को लागि, सधैंभरि हराएको छ ताकि। विशेष गरी आफ्नो उपकरण सप्ताहन्तमा एक विशेष आकर्षक स्थान मा स्थित छ भने। उदाहरणका लागि, सुपरमार्केट, खेल क्लब, शहर को नृत्य फर्श, र यति मा कुनै पनि। डी
नियामक रूपरेखा, र आर्थिक समस्या
यस्तो गतिविधि, पाइने, को NACE मा आफ्नो ठाँउ छैन। फलस्वरूप, यो मामला मा हामी विभिन्न कोड प्रयोग गर्नुहोस्। 52.61.2 अतिरिक्त गतिविधि - "कम्प्युटर नेटवर्क र मार्फत खुद्रा बिक्री:" अन्य खुद्रा व्यापार बाहिर स्टोर परिसर ", अक्सर टर्मिनलहरु को प्रयोग कोड को पूर्ण सीमा छन् सिफारिस - खाद्य उत्पादन, साथै सामान अन्य प्रकारका बेच मिसिन लागि, सामान्यतः समूह 52,63 प्रयोग टेलिभिजन infomercials (इन्टरनेट सहित व्यापार) "; 52,48 - "विशेष पसलहरूमा विभिन्न अन्य व्यापार"; 72.60 - "कम्प्युटर जानकारी प्रविधिहरू र प्रविधी प्रयोग गर्न सम्बन्धित गतिविधिहरु"; 74,84 - "अन्य सेवाहरूको प्रावधान"; 93,05 - "अन्य व्यक्तिगत सेवाहरूको प्रावधान।"
स्वचालित जगेडा प्रदर्शन कि मिसिन लागि, तपाईं कोड 74,83 प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी गुप्तिकरण गरिएको "सम्पादकीय, सेक्रेटियल सेवाहरू, अनुवाद सेवाहरू blueprinting, प्रतिलिपि र प्रतिलिपि सिर्जना गर्न अन्य यस्तै गतिविधिहरु सहित प्रदान।" वा अड्डा, को कोड जसको अर्थ "सार्वजनिक सेवाहरू सबै-रूसी विशेषक।" वा कोड 019 726 - ", लेखन आवेदन बाहिर प्रकारका भर्नु, प्रति लागि सेवाहरूको प्रावधान हो।"
कार सिट, सबैलाई एक "मालिश सेवाहरू" कोड 71.40.3 (एक "भाडा फर्नीचर, गैर-विद्युत र बिजुली उपकरण") र 71.40.9 (एक "भाडा, आदि .. घरेलू सामान र व्यक्तिगत वस्तुहरूको मार्फत आयोजना गर्छन दिन्छ घरेलू को एक किसिम ") को लागि प्रयोग गर्नुहोस्।
सही कोड निर्धारण को समस्या सामना गर्न क्रममा, यो आवश्यक प्रासंगिक कर कार्यालय तपाईं कर रेकर्ड मा आबद्ध जहाँ यो मुद्दा मा परामर्श गर्न, यो भविष्यमा यी निरीक्षकों तपाईं द्वारा पेश कागजातहरू मूल्याङ्कन हुनेछ भएकोले हो।
कर निर्धारण पाइने व्यापार
यस मामला मा कराधान यसलाई धेरै सजिलो हुनेछ। यो अवस्थामा, यो पेश कर regimes, दुवै सामान्य र सरल वा UTII (यदि यो पहिले एक विशेष गतिविधिको लागि एक विशिष्ट क्षेत्र मा राख्नु भएको छ) को कुनै पनि प्रयोग गर्न सम्भव छ। , गतिविधि मिसिन प्रयोग गरेर केहि को बिक्री समावेश कि खातामा लिएर नियमको रूपमा बेला खुद्रा व्यापार वा व्यक्तिगत सेवाहरूको प्रावधान गर्न पहिले नै हो, बाद थप प्रयोग गर्न आवश्यक हुनेछ। वित्त मंत्रालय यस्तो व्याख्या विरुद्ध केही छ।
तर, हामी व्यापार वेंडिंग को कराधान अध्ययन भने, वेंडिंग मिसिन को आदर मा सबै भन्दा contentious मुद्दा आर्थिक स्मृति छ जो नगद रजस्टर, यस्तो उपकरणहरू प्रयोग गर्न आवश्यकता को समस्या छ।
प्रतिफलको अनुमानित गणना
अनुमानित गणना payback एक ठूलो शैक्षिक संस्था मा माउन्ट छ जो स्वचालित कपीयर, एक उदाहरण कार्यान्वयन।
1 घण्टा कापियर लागि, उदाहरणका लागि, पृष्ठ3प्रतिहरू आफैलाई लागि प्रदर्शन5विद्यार्थी प्रयोग गर्नुहोस्। एउटै समयमा कापियर आठ एक दिन दस घण्टा कुल लागि, साँझ बजे सम्म बिहान दस बजे देखि उपलब्ध छ। पुस्तकालयको 1 महिना भित्र 26 दिन छ, कतै आइतबार, बाहेक हरेक दिन खुला छ। तसर्थ, हामी मिसिन सम्पूर्ण दिनको लागि 150 फोटोकपी वा एक महिना भित्र 3.900 प्रतिहरू उत्पादन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न, आवश्यक गणना बनाउन। यदि यस्तो डेटा वर्ष 12 महिना ले गुणन छ, त्यसपछि साँच्चै यो अवधिमा 46.800 प्रतिहरू प्राप्त।
एक-पृष्ठ मुद्रण को मूल्य5rubles बराबर हुनेछ भने।, एक वर्षको लागि, "कार्यकारी" 234.000 rubles प्राप्त गर्नेछ।
अर्को, हामी आवश्यक मर्मत लागत लागि गणना, साथै भाडामा प्रदर्शन।
सफल कारतूस को दुई विभिन्न प्रकारका आवश्यक हुनेछ हुन कापियर। टोनर, पहिले र मुद्रण क्यासेट, दोश्रो। नियम, पहिलो तत्व 4000-6000 प्रतिहरू कतै छुटेका गर्न। र हामी न्यूनतम लिन भने, त्यसपछि क्यासेट को प्रतिस्थापन महिनामा एक पटक गर्नुपर्छ। यस मामला मा, यो मूल्य कहीं 3200 rubles मा हुनेछ। तर, टोनर क्यासेट Refilling को संभावना (दुई पटक सम्म) सीमित छ। र भरने स्टेशन प्रत्येक लागि मूल्य 900 rubles छ। तसर्थ, 5000 rubles मा परेर।, वास्तवमा एक टोनर क्यासेट मात्र तीन पटक प्रयोग गर्नुहोस्। प्रतिस्थापन पनि वर्षमा आवश्यक चार पटक हुनेछ। र 20 000 rubles को लागि। यो केवल कारतूस मा एक वर्ष जानेछ।
ड्रम एकाइ, नियम, 20 000 प्रिंट लागि डिजाइन गरिएको छ। त्यसैले, एक वर्ष दुई यस्तो तत्व आवश्यक हुनेछ। एक ड्रम 3,000 rubles अनुमान गरिएको छ भने।, एक वर्षको लागि पहिले नै 6000 rubles बराबर रकम प्राप्त गर्दछ।
। कागज को लागत - कहीं 120 rubles, यदि 500 पानाहरू प्याक। 3.900 प्रतिहरू बाहिर महिनामा एक पटक, क्रमशः प्रति महिना 960 rubles, वा प्रति वर्ष 11.520 rubles को राशि, आवश्यक हुनेछ 8 पैक।
तसर्थ, वर्षको लागि कुल लागत 20000 + 6000 + 11520 = 37520 rubles बराबर छन्।
अर्को भाडामा। एक रोबोट 1 मिटर2छ। यो प्रति महिना 4,000 अनुमान गरिएको छ भने, एक वर्ष मा 48,000 rubles छ।
अब हामी राशि दुई (आपूर्ति र लागत परिचालन) र यसरी 85.520 rubles प्राप्त प्राप्त नपुगेको।
यो पनि कर बारे सम्झना लायक छ। गणना केही रकम 14 040 rubles बराबर देखिन्छ। वर्ष को लागि। खर्च को कुल रकम - 99.560 rubles।
134 440 rubles - वर्ष (। 234 000 rubles) को लागि कुल आय खातामा लिएर हामी एक सम्भव पूर्ण-वर्ष लाभ को मूल्य प्राप्त। र यो रकम मा एकदम सम्भव आधा एक धेरै कार्यात्मक कापियर किन्न छ। यसरी, avtokopir वर्ष समयमा पूर्ण भुक्तानी बन्द।
यो मूल काम उद्यमी व्यक्तिगत भाडामा व्यक्ति को संलग्नता बिना बाहिर छ हुन मानिन्छ थियो जो सिर्फ एक सरल उदाहरण छ - तर, हामी यो गणना भनेर बिर्सनु हुँदैन। बस्तियों बाहिर अनिवार्य पेन्सन बीमा लागि स्थिर शुल्क रहनेछ।
व्यापार को सबै भन्दा होनहार लाइनको रूपमा पाइने
तथापि, कानून प्रवर्तन र कानून साथै, विभिन्न बाहेक, व्यावहारिक समस्या, आज वेंडिंग सबैभन्दा होनहार निर्देशनहरू को एक, जो हरेक विभिन्न व्यापार रणनीति सम्भावित विकल्प महसुस गर्न मौका दिनुहुन्छ रहनेछ।
1 तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न, एक वा तीन बन्दुक आफूलाई निषेध थप र थप आय जम्मा एक नेटवर्क मिसिन यति महत्वपूर्ण छैन लाभ, वा काम हो।
अनुसार संलग्नता र अन्य उद्यमीहरू संग franchising को 2. विकास।
3. गतिविधिको दोस्रो प्रकार। तपाईंले पहिले नै आफ्नो पसल, साथै दोस्रो आय को स्वचालित संस्करण छ।
आफ्नो औँलामा सबै! यो अभिनय सुरु बुद्धिमानी हुन सक्छ?
कसरी कफी लागि उपकरण चयन गर्न? सुविधा र समीक्षा
स्क्राच पैसा कमाउन कति चाँडो मास्को मा गर्न?
मोजा को उत्पादन को लागि उपकरण के छ?
आफ्नै हातले धमकी दिन खेत: व्यापार योजना
कसरी पैसा, घर मा बसेर जहाँ तपाईं पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ बनाउन
सफल चीन काम गर्दा सुरु
व्लादिमीर Samsonov - टेनिस स्टार
जहाँ द्वीप Mako छ र उहाँले वास्तवमा अवस्थित कि
उचित संगठनात्मक संरचना - सफल एक अद्वितीय मौका
बचाव राम्रो के? छिटो-बढ्दै hedges
"राजा र मूर्ख": Discography र unreleased एकल एल्बम
दुई-फ्याक्ड ऊर्दा रेगिस्तानको एउटा जहाज हो
के आधार र सञ्चालन रूपमा जेनेरेटर Tesla लागू गरिएको
जहाँ किन्न Velpatasvir (Epclusa)? Velpatasvir (Velpanat, Velasof): रूस मा मूल्य
मत्स्यांगना पोशाक: कुनै पनि पार्टी एक उज्ज्वल र मूल बाटो
आफ्नो मानसिक क्षमता कसरी विकास गर्न
रहस्य truckers अनुभवी, वा प्लास्टिक तहखाने कसरी स्थापना गर्न